Motivation for success :: यीे हुन् विनोद चौधरीसँग घुस माग्ने राष्ट्र बैंकका संचालक
यीे हुन् विनोद चौधरीसँग घुस माग्ने राष्ट्र बैंकका संचालक
प्रकाशित मिति : बिहिबार, बैशाख ८ २०७९
काठमाडौं – राष्ट्र बैंकको घुस काण्ड बाहिरिएपछि देशभर नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ। राष्ट्र बैंकका सञ्चालक डा. सुबोधकुमार कर्णले विनोद चौधरीका छोरासँग ३० हजार डलर घूस मागेको म्यासेज सहित गम्भीर खुलासा भएपछि तरङ्ग पैदा भएको हो ।
राष्ट्र बैंक ऐन विपरित बैंकको मर्जरमा सघाउने आश्वासन दिएको भन्दै सञ्चालक कर्णले चौधरी समूहका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीसँग ३० हजार डलर अर्थात लगभग ३६ लाख नेपाली रुपैयाँ घुस मागेका छन् ।
प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा व्यवसायी विनोद चौधरीका छोरा हुन्। अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक दुवै स्रोतले यसको पुष्टि गरेको छ। यो घूस प्रकरणको विषयमा अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जानकार भए पनि अहिलेसम्म कर्णमाथि कारबाहीको प्रक्रिया शुरू भएको छैन।
शुक्रबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थ मन्ली शर्माले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिका एक सदस्यले घूस मागेको कुरा आफूले सुनेको बताएका थिए। केन्द्रीय बैंकका ती सञ्चालकले ३० हजार इलर चाहियो भनेर बार्गेनिङ गरेको तर आफूलाई त्यसको आधिकारिकता भने थाहा नभएको अर्थ मन्त्रीको कथन थियो।
त्यस्ता सञ्चालक समिति सदस्य भएपछि पारदर्शिता हुन्छ ? सबैले आफ्नो ठाउँमा मर्यादा राख्नु पर्दैन ? अर्थ मन्त्रीले प्रश्न गरेका थिए। अर्थ मन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा नखुलाए पनि बार्गेनिङ गर्ने राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति सदस्यबारे उनलाई सूचना यसअघि नै पुगेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
प्राप्त सूचना अनुसार, चौधरी समूहले राष्ट्र बैंकमा खेपिरहेको व्यवधानको गाँठो फुकाउन सघाउने शर्तमा कर्णले प्रबन्ध निर्देशक निर्वाणलाई कम्तीमा एक महीनाअघि ३० हजार अमेरिकी डलर माग्दै मोबाइल सन्देश पठाएका थिए। निर्वाणले तत्काल यो विषयको जानकारी चौधरी समूहका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेका बुबा विनोद चौधरीलाई गराएका थिए।
कर्णले सन्देश पठाएको केही दिनपछि फेरि ताकेता सन्देश पठाएपछि विनोद चौधरीले यो विषयको जानकारी अर्थमन्त्री शर्मा र प्रधानमन्त्री देउवालाई गराएको स्रोतको दाबी छ। कर्णले चौधरी समूहको मुख्य शेयर स्वामित्व रहेको नबिल बैंक र नेपाल बाङ्लादेश बैंकको मर्जरको प्रक्रियालाई अघि बढाउन सघाउने, कर छूटका लागि सहयोग गर्ने तथा केन्द्रीय बैंकमा अड्किएको सिजी सिमेन्टको शेयर लेखाङ्कन सम्बन्धी प्रस्तावलाई खुलाइदिने शर्तमा बार्गेनिङ गरेको स्रोतको दाबी छ।
राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले पनि कर्णको क्रियाकलापबारे जानकारी पाइसकेको केन्द्रीय बैंक स्रोतले जानकारी दियो। अहिले कर्णलाई सञ्चालक समिति सदस्यका रूपमा बोर्ड बैठकमा आमन्त्रण गर्न छोडिएको स्रोतको दाबी छ।
‘राजीनामा दिनुस् भनेर सञ्चालक समितिले आरोपित कर्णलाई जानकारी गराइसकेको सूचना पाएका छौं,’ केन्द्रीय बैंकका उच्च अधिकारीले भने। राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य कर्णले सन्देश पठाउँदै आफूमाथिको आरोप आधारहीन तथा सरासर झूटो भएको जनाएका छन्।
‘अहिलेको परिस्थितिमा यो राजनीतिक रूपमा उत्प्रेरित आरोप हो,’ उनले भने। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ११ वैशाख २०७५ मा उनलाई पाँच वर्षका लागि केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो। उनको पदावधि अझै एक वर्ष बाँकी छ।
कर्ण नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका पूर्व अध्यक्ष तथा साउथएशिएन फेडेरेशन अफ एकाउन्टेन्ट्स (साफा)का पूर्व अध्यक्ष हुन्। उनी यूएचवाई सुबोध एशोसिएट्स कम्पनीका सञ्चालक पनि हुन्। उनले यसअघि २०७३ सालमा महालेखा परीक्षकमा नियुक्तिका लागि आवेदन दिएका थिए।
संवैधानिक परिषद्ले २०७४ वैशाखमा टंकमणि शर्मालाई महालेखा परीक्षकमा नियुक्तिको सिफारिश गरेपछि त्यस विरुद्ध कर्ण सर्वोच्च अदालत गएका थिए। उनले शर्माको महालेखा परीक्षक बन्ने योग्यता नपुगेको भन्दै नेपाल सरकार, संवैधानिक परिषद लगायत विरुद्ध उत्प्रेषण, परमादेश समेत माग गरेका थिए।